प्रथम शिखर वार बुदोकैदो हुने खुल्लातर्फ पुरुष तथा महिलातर्फबो विजेताले एक–एक तोला सुनको मेडल प्राप्त गर्नेछन् ।
बक्सिङ टोली सर्बिया प्रस्थान च्याम्पियनसिप अक्टोबर २५ देखि नोभेम्बर ६ सम्म हुनेछ । च्याम्पियनसिपमा विश्वका १०५ राष्ट्रको १३ वटा तौल समूहमा ६५० जना खेलाडीहरुको सहभागीता रहेको छ ।
बिदाइ कार्यक्रममा खेलाडी नै अनुपस्थित ! तर, सर्बियाको बेलग्रेडमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोली नै बिदाइ कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।
पदक विजेता खेलाडी सम्मानित अक्टोबर २ तारिखमा भएको प्रतियोगितामा नेपालबाट ३ पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नेपालले ४ स्वर्ण र २ कांस्य जितेको थियो । तीनै खेलाडीले दोहोरो पदक जितेका थिए ।
निरजलाई सर्वाधिक ७५ अंक नेपाल गोर्खा खुकुरी मार्सल आर्ट्स संघद्वारा आयोजित ग्रेडिङमा सुदूरपश्चिमकै गोविन्द कठायत दोश्रो तथा बागमती प्रदेशकी सुजिता तामाङ तेश्रो भए ।
गोविन्द र सुस्मिता उत्कृष्ट प्रतियोगिताको पुरुष ५५–६० केजीमा विकेशराज श्रेष्ठ र जीवन लोहार, ५०–५५ केजीमा कुलमान तामाङ र गोविन्द कठायत, ४५–५० केजीमा साजन तामाङ र प्रेम गुरुङ, ४०–४५ केजीमा सचिन बोगटी र निराजन बुढाथोकी तथा ३५–४० केजीमा निरज बोहरा र अमिर गुरुङ क्रमशः पहिलो र दोश्रो भए ।
टाइसनद्वारा डियोन्टे नकआउट ! अमेरिकाको लास भेगासमा आइतबार भएको फाइटमा टाइसनले डियोन्टेलाई ११ औं चरणमा नकआउट गरेका थिए । यससँगै टाइसन व्यावसायिक रुपमा ३२ औं फाइटसम्म अपराजित रहेका छन् ।
स्वर्णधारी मन्दे र मुकुन्द्र स्वदेश फर्किए टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्की बोर्ड सदस्य इन्दिरा निरौलालगायतले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे ।
मन्दे र मुकुन्द्र अस्ट्रियामा सम्मानित एनआरएनए एलसीसी साल्जवर्गले स्वर्णधारी श्रेष्ठ र महर्जनलाई बिहीबार सम्मान गरेको हो ।
ड्रागन टिम च्याम्पियन कालभैरव उसु क्वानद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा काठमाडौं उसु क्वान ५ स्वर्ण, ५ रजत र १० कांस्य जित्दै दोश्रो भयो । तेश्रो स्थानको त्रिकोण उसु क्वानले ५ स्वर्ण, ३ रजत र २ कांस्य हात पार्यो ।
प्रज्ज्वललाई स्वर्ण कालभैरव उसु क्वानद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला थाइची छ्वानमा ड्रागन उसु क्वानकी डिना तामाङले काठमाडौं उसु क्वानकी ऐश्वरी भट्टलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितिन् ।
नेपालका ४ खेलाडीले विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाल बक्सिङ संघले बुधबार विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका ४ खेलाडीको सहभागिता रहने जनाएको छ ।
प्रकाश दाहाल स्मृति बक्सिङ कात्तिक अन्तिम साताबाट प्रकाश दाहाल स्मृति प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा हुने प्रतियोगिता आईबाको नियम अनुसार खेलाईनेछ ।
कालभैरब खुल्ला जुनियर उसु हुने प्रतियोगितामा ४० भन्दा बढी उसु क्वानका करिब ३०० जना खेलाडीहरुको सहभागीता रहने आयोजकका अध्यक्ष निकेश श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन् ।